Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dalka kusoo laabtay. – Radio Daljir
Janaayo 28, 2016 8:27 b 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtey magaalada Muqdisho, kadib markii uu magaalada Eldoret ee dalka Kenya kaga soo qeybgaley baroor-diiq qaran oo loo sameeyay askartii dhowaan degaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo looga dilay Kenya.
Munaabadaasi oo sidoo kale ay ka soo qeybgaleen Madaxweyneyaasha Jamhuuriyadda Kenya, Uhuru Kenyatta, iyo Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria, ayaa khudbad uu ka jeediyay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uu xusey in Soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay Kenya, dagaalka lagula jiro argagagaxisada.
Waxaa sidoo kale uu Madaxweynaha kulan gaar ah la yeeshay Madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo ay ka wadahadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin ka tirsan labada gole .
Madaxweynaha Soomaaliya oo aan weli ka hadlin shacabka Kenya ku laynayso gobolka Gedo.